RFID လက်ပတ်၊ NFC ထုတ်ကုန်များ၊ PVC ကတ်၊ သတ္တုကတ် - Chuangxinji စက်ရုံ။
PVC သော့ fob/Snap-off သော့ Tag
စိတ်ကြိုက်ပုံနှိပ်ခြင်း ပလပ်စတစ် PVC သစ္စာရှိလက်ဆောင်ကတ်များ
စိတ်ကြိုက်ပလပ်စတစ် PVC NFC ကတ်-MIFARE Ultralig...
မိုဘိုင်းကြိုးမဲ့ IOS Android pos terminal nfc rf...
သတ္တု NFC Sticker FPC NF ပေါ်ရှိ Microchip အသေးစား
တာဝန်ကျလုံခြုံရေး rfid ကင်းလှည့်ခြင်း သတ္တုဆန့်ကျင်ရေး nfc တက်ဂ်
သတ္တု NFC အကြွေစေ့ Tag တွင် ဗလာမပါသော RFID စတစ်ကာ
သတ္တုပေါ်တွင် စိတ်ကြိုက် PVC PET RFID စတစ်ကာ ခဲတံ ၂...
လုံခြုံရေး Ntag213 rfid ကင်းလှည့်သတ္တုဆန့်ကျင်ဒင်္ဂါးပြားဆီသို့ ...
အသေးစား fpc သတ္တု 213 ပေါ်ရှိ အသေးစား dia10mm n...
2001 နှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Shenzhen Chuangxinji smart card co.,Ltd သည် အထူးပြုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။
PVC ကတ်၊ RFID ကတ်၊ NFC လက်ကောက်နှင့် RFID Tag စသည်တို့ကို ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်း။
ခေတ်မီပြီး အဆင့်အတန်းမြင့်သော ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း သုံးခုကို ပိုင်ဆိုင်သည်။
လစဉ်ထွက်ရှိမှု 20,000,000 ကတ်များပါရှိသော PVC ကတ် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း- အသစ်စက်စက် CTP စက်များနှင့် Heidelberg အမှတ်တံဆိပ် အော့ဖ်ဆက်ပုံနှိပ်စက်များ၊ ပေါင်းစပ်စက် ၈ လုံး။
လစဉ် အထွက် 20,000,000 ကတ်များပါရှိသော အင်တင်နာ ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း- လိပ်မှ ပုံနှိပ်စက်များ၊ ပေါင်းစက်များ၊ တိုက်စားခြင်းနှင့် ထွင်းထုခြင်းအတွက် စက်များ။
လစဉ်ထွက်ရှိမှု 500,000,000 စမတ်ကတ်များနှင့် 300,000,000 RFID တဂ်များပါရှိသော RFID ထုတ်ကုန်အဆုံးထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း- ပြောင်းပြန်တပ်ဆင်သည့်စက်များ ဒြပ်ပေါင်းသေသပ်ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်များ၊ ထုပ်ပိုးထားသောစက်များ။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် အင်္ဂလိပ်၊ ဂျာမနီ၊ ပြင်သစ်၊ စပိန်၊ အာရဗီစသည်ဖြင့် ပြောဆိုသော စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ဝန်ထမ်း ၆ ဦးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းသည် ဥရောပ၊ အမေရိက၊ အိုရှန်းနီးယား၊ အာဖရိက၊ အာရှနှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်း နိုင်ငံများနှင့် ဒေသများမှ ဖြစ်သည်။
Metro RFID ကတ် အောင်မြင်မှုကိစ္စ
ကာတာလေကြောင်းလိုင်းမှ ပလပ်စတစ် pvc ခရီးဆောင်အိတ် Tag
RFID အဝတ်လျှော် လျှော်နိုင်သော စာဂ်များ
ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီမှ လတ်တလောသတင်းများဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီသတင်းများ၊ လုပ်ငန်းဆောင်းပါးများနှင့် ခေတ်မီဆောင်းပါးအချို့ကို ဤ module တွင် အခါအားလျော်စွာ အပ်ဒိတ်လုပ်ပါမည်... ဤအမျိုးအစားများကို သင်နှင့်မျှဝေလိုသည်မှာ ဝမ်းမြောက်မိပါသည်၊ သင်နှစ်သက်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
သို့သော်လည်း ဂိုဒေါင်လင့်ခ်တွင် ကုန်ကျစရိတ် မြင့်မားပြီး ထိရောက်မှု နည်းပါးသော လက်ရှိ ပကတိ အခြေအနေ များကို စုံစမ်း စစ်ဆေးခြင်း o...
RFID နည်းပညာသည် အဝတ်လျှော်လုပ်ငန်း၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်ကို များစွာတိုးတက်စေသည်။
အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း အဝတ်အထည်လုပ်ငန်းမှာ RFID အသုံးချမှုဟာ အလွန်အသုံးများလာပြီး ထူးထူးခြားခြား im...
1. RFID ဆိုတာဘာလဲ။ RFID သည် Radio Frequency Identification ၏ အတိုကောက်ဖြစ်ပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းသတ်မှတ်ခြင်း ....
RFID တက်ကြွမှုနှင့် passive အကြား ခြားနားချက်နှင့် ချိတ်ဆက်မှု
1. အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် Active rfid ဟုလည်းသိကြသော၊ ၎င်း၏လည်ပတ်မှုပါဝါအား အတွင်းဘက်ဘတ်မှ လုံး၀ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။